Aqoonyahan Cabdirisaaq Axmed oo ka hadlay Caqabadaha Haysta dhalinyarada (dhegayso) – Radio Daljir
Agoosto 13, 2018 3:35 g 0
Tan iyo Bur-burkii Dowladii Dhexe ee soomaaliya waxaa meesha ka baxay doorkii Dhalinyarada Somaaliyeed ay kulahaayeen dhinacyada Horumarka, Siyaasadda,shaqooyinka .
Dhalinta somaaliyeed ayaa Noqotay kuwa dalka ka tahriibay iyo kuwo loo adeegsaday dagaaladii Sokeeye ee Mudadii Burburka uu dalku ku jiray.
Soomaaliya Dhalinyarada ay da’doodu ka yar tahay 30 sano jirka waxaa lagu qiyaasaa Boqolkiiba 75%.
Dhalinyaradu meel kasta iyo wadan kastaba waa Mustaqbalka ummada ee manta iyo berito, ummad walibana waxaa wanaageeda iyo Horumarkeedu ku xiranyahay kolba inta ay la egtahay kartida iyo aqoonta dhalinyaradeeda.
Balse waxaa haysta Dhalinyarada Soomaliyeed dhibaatooyin baahsan oo isbar bar socda oo ay ka mid yihiin Shaqo la’aan ,Tababar La’aan iyo Dhaqaale la’aan .
Haddaba iyadoo shalay ay ku beegnay maalinta dhalinyaradda Soomaaliyeed ayaa waxaan waraysi la yeelanay Gudoomiyaha barnaamijka ku celi waxaad baratay dhulkaaga hooyo Cabdirisaaq Axmed Jaamac Wadani oo kamid ah dhalinyaradda Puntland oo kunool magaalada Garoowe wariye Axmed Sheekeeye ayaa la kulmay waxaa uu waydiiyay su’aalaha ah Waa Maxay caqabadaha Hortaagan Dhalinyarada Soomaaliyeed? Sidee baa loo yareyn karaa, hadii ay adkaatey in la soo afjaro ?